Repoblika Demôkratikan' i Kôngô - Wikipedia
Repoblika Demôkratikan' i Kôngô
(tonga teto avy amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo)
République démocratique du Congo ((fr))
Repubilika ya Kongo Demokratiki kg
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sw
Republiki ya Kongó Demokratiki ln
Ditunga dia Kongu wa Mungalaata lua
Repoblika Demokratikan'i Kongo ((mg))
Teny filamatra : « Justice, Paix et Travail »
Teny ofisialy Français
- Mpiray ministra Repoblika
- Rano (%) faha 12
- hakitroka faha 18
66 514 504 mpo.
Anaran'ny mponina Kongolezy
Sandam-bola Franc Kongolezy (CDF)
Faritr'ora UTC +1 et +2
Hiram-pirenena Debout Congolais
Ny Repoblika Demokratikan' i Kôngô dia firenena ao amin' ny faritr' i Afrika Afovoany. Izy no firenena ao Afrika ngeza indrindra eo aorian' i Sodàna sy i Aljeria; izy koa no firenena ngeza indrindra sy be mponina indrindra ao amin' ny faritr' i Afrika afovoany. Iantsoana azy koa ny hoe Kôngô-Kinshasa mba tsy hifangaroany amin' i Kôngô-Brazzaville. I Kinshasa no renivohiny, avy eo no niavian' ilay anarana hoe Kôngô-Kinshasa. I Zaira koa no anaran' io firenena io tamin' ny 1971 hatramin' i 1997, teo izy niova Repoblika Demôkratikan' i Kôngô. Ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô no firenena be mponina indrindra ao amin' ny fikambanan' ny firenena miteny frantsay eo alohan' i Frantsa.
1.1.1 Mponina voalohany
1.1.2 Fiitaran' ny fanjaka-mpanjaka
1.1.3 Ny faharavan' ny Empira Londa
1.1.4 Fahazoan' i Stanley fahefana feno tao Congo
1.2 Ny fanjanahan-tany belza
1.2.1 Ny Fanjakana Mahaleotenan' i Congo
1.2.2 Lasa fananan' i Belzika
1.3 Fitakiana fahaleovan-tena
1.3.1 Fitakiana fahaleovan-tena
1.3.2 Tsy fifanarahan' ny mpitaky fahaleovan-tena
1.4 Ny fitondran' i Kasavubu
1.4.1 I Kasavubu no filoham-pirenena
1.4.2 Ny fisaraham-bazan' i Katanga
1.4.3 Ny nahafatesan' i Patrice Lumumba
1.4.4 Fitsaharan' ny fisaraham-bazan' i Katanga
1.4.5 Fitohizan' ny fiokoan' ireo mpomba an' i Lumumba
1.5 Ny fitondran' i Mobutu Sese Seko
1.5.1 Fanonganana an' i Kasavubu sy fitondrana jadon' i Mobutu
1.5.2 Nanamafy ny maha filoha azy tamin' ny fifidianana i Mobutu
1.5.3 Fitontogan' ny toekarena sy pôlitikan’ ny fitsitsiana
1.5.4 Fihozongozonan' ny fitondran' i Mobutu
1.5.5 Ny olana nateraky ny adin’ ny Hoto sy ny Totsy
1.5.6 Fidarabohan’ ny fitondrana tao Kisangani
1.6 Ny fitondran’ i Laurent-Désiré Kabila
1.6.1 Fanonganam-panjakana sy ampihi-mamba
1.6.2 Tompon’ antoka tamin’ ny fandripahana ny Hoto
1.6.3 Fikomian’ ny Totsy baniamolenge
1.6.4 Fanirahana ny MONUC hiantoka ny fampitsaharana ny ady
1.7 Ny fitondran’ i Joseph Kabila
1.7.1 Fiakaran’ i Joseph Kabila teo amin’ ny fitondrana
1.7.2 Fifanarahana hitondrana ny firenena
1.7.3 Fitohizan’ ny ady an-trano tany amin’ ny faritra atsinanana
1.7.4 Fahalanian’ i Joseph Kabila voalohany
1.7.5 Fahalanian’ i Joseph Kabila fanindroany
1.8 Ny fitondran’ i Félix Tshisekedi
2.1 Ny tany sy ny zavaboary ao aminy
2.1.1 Ny vohon’ny tany sy ny rano
2.1.4 Biby sy vorona
2.2 Ny mponina sy ny fiarahamonina
2.2.1 Ny vondrom-poko sy foko
2.3.2 Ny loharanon-karena voa-janahary
2.3.3 Ny fambolena
2.3.4 Ny fiompiana sy ny jono
2.3.5 Harena an-kibon’ny tany sy taozava-baventy
2.3.6 Ny fifanakalozana anatiny
2.3.7 Ny fitaterana
2.3.8 Varotra ivelany
3.1 Ny fivavahana
3.3 Ny fampianarana
Ny tantaran' ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô dia voamariky ny fisian' ny fisian' ny fanjakana maro madinidinika tany aloha, ny fahatongavan' ny Eorôpeana, ny fivarotana andevo, ny fanjanahan-tany belza, ny fahaleovan-tena, ny ady an-trano, ny fanonganam-panjakana, ny fitsabahan' ny firenena mpifanolo-bodirindrina, ary ny fizorana mankany amin' ny demôkrasia.
Talohan' ny fanjanahan-tanyModifier
Efa nisy olona ity faritra ity tamin' ny 200 000 taona tal. J.K. Ny lemaka midadasika kôngôley tamin’ izany fotoana izany dia rakotry ny ala tsy nisy nanimba. Tany amin’ ny taonarivo faharoa dia nisy mpamboly banto, avy any amin' ny faritra eo anelanelan' ny tapany atsinanan' i Nizeria sy ny Grassfields any Kamerona, hatramin' ny 2600 tal. J.K., niditra tao amin’ io faritra io ka niorim-ponenana amin’ ny morontsiraka sy teny amin’ ny lembalemba atsinanana sy atsimo, ka teny izy ireo no nanangana fiarahamonina tarihin’ ny lehibem-poko.
Nisy ny fanjakam-panjaka niorina koa teo anelanelan' ireo taonjato voalohany taor. J.K. sy ny taonjato faha-15, ka ny lehibe indrindra amin' ireo dia ny fanjakan' i Loba (Luba) sy ny fanjakan' i Londa (Lunda) ary ny fanjakan' i Kôngô (Kongo). Tamin’ ny taona 1482 dia nifandray voalohany tamin’ ny fanjaka-mpanjaka banto tao Kôngô (Kongo) ny Pôrtogey.
Fiitaran' ny fanjaka-mpanjakaModifier
Rehefa tonga tamin’ ny tampon’ ny heriny ny fanjaka-mpanjaka dia niitatra mankany amin’ ny faritra misy an’ i Angôla sy Gabôna ankehitriny. Tamin’ ny taona 1489 dia nisy masoivohon’ i Kôngô (Kongo) namangy ny mpanjakan’ i Pôrtogaly, ary tamin’ ny taona 1490 dia nisy misionera fransiskana sy mpanao taozavatra pôrtogey niorim-ponenana tao amin’ io faritra io. Tonga koa ny Zezoita ka nampiova ho amin' ny fivavahana kristiana ny mpanjaka sy ny vahoakan' ny fanjkakan' i Kôngô. Nihalefy hery, avy eo rava anefa izany fanjakana izany, ary nitodi-doha tany Angôla, izay tsy dia nahitana fanoherana ny fivarotana andevo, ny Pôrtogey.
Ny faharavan' ny Empira LondaModifier
Tamin’ ny taonjato faha-16, ireo Loba (Luba) dia nanorina ny Empira Londa (Lunda) tao atsimo, izay niroborobo vokatry ny fandrosoan’ ny raharaham-barotra teo anelanelan’ ny ranomasimbe Atlantika sy Indiana. Nizarazara ho fanjaka-mpanjaka maro izany Empira izany tamin’ ny taonjato faha-17. Ny fivarotana andevo mainty hoditra dia niely tao amin’ ny faritra Bas Kasaï sy tany Katanga. Tamin’ ny taonjato faha-19 dia nandroso indrindra ny fivarotana olona tao amin’ ny faritra avaratra. Ny fidiran’ ny Eorôpeana tao dia efa taty aoriana, nitoetra tany amin’ny morontsiraka hatrany mantsy ny Eorôpeana.
Fahazoan' i Stanley fahefana feno tao CongoModifier
Tamin’ ny taona 1874 hatramin’ ny 1877 dia nizaha ny onin’ i Congo ilay mpijery tany britanika atao hoe Henry Morton Stanley. Nanorina ny Association internationale africaine (AIA) tamin’ ny taona 1876 ny mpanjakan’ ny Belza atao hoe Léopold II. Niady tamin' ny fanandevozana ity fikambanana ity sady nanan-tanjona momba ny fikarohana ara-tsiansa. Nifanaraka tamin'ny tompon-tany i Stanley mba hahafahany mahazo tany sy mitrandraka ny haren' ilay faritra. Nanorina tobim-barotra maro i Stanley, ka isan’ izany i Stanleyville sy i Léopoldville.
Ny fanjanahan-tany belzaModifier
Ny Fanjakana Mahaleotenan' i CongoModifier
Nisy ny fanjakana, isan’ izany i Frantsa sy i Pôrtogaly, izay nilaza ho manana tany tao amin’ io faritra io, ka ny fivoriam-be natao tao Berlin tamin’ ny taona 1885 no nanaiky ny maha masi-mandidy ny mpanjaka Léopold II amin’ ny ampahany be amin’ ny lemaka tondrahan’i Congo sy ny faritra ivoahan’ ity ony ity any amin’ ny ranomasina.
Nanao ampihi-mamba ny fivarotana fingotra sy vangin’ elefanta ilay Fanjakana Afak' i Congo (Etat libre du Congo). Nandroso ny fitaterana entana amin’ ny alalan’ ny filanjana. Tamin’ ny taona 1897 dia nampidirina tao amin’ io faritra io ny asa an-tery vozona. Izany fanararaotana izany, sy ny taham-pahafatesana mbony nateraky ny filanjana entana, dia nampihetsi-po ny mpanara-baovao, ka nisy ny fampielezan-kevitra avy ao amin’ ny Fanjakana Mitambatra (Britaina Lehibe) izay nanameloka izany fanararaotana nataon’ ny fitondran’ i Léopold II izany.
Lasa fananan' i BelzikaModifier
Tamin’ ny taona 1908 dia lanin’ ny Antenimiera belza ny hampiankina ny Fanjakana Afak’ i Congo tamin’ ny mpanjakan’ ny Belza, ka nanjary fananan’ i Belzika amin’ izay izany tany izany. Nandritra ny Ady Lehibe Voalohany dia niady niaraka tamin’ ny Miaramila mitambatra (Alliés) ny andian-tafika kôngôley ka nahazo ny ampahany amin’ ny faritr’ i Tanganyika (i Tanzania ankehitriny) sy nahazo koa an’ i Roanda-Orondy (Ruanda-Urundi), tany fehezin’ ny Alemàna, izay napetraka eo ambany fitantantan’ i Belzika araka ny alalana nomen’ ny Fikambanan’ ny Firenena (Société des Nations) tamin’ ny taona 1919.
Tamin’ ny taona 1955, raha nitombo ny fitakiana fahaleovana nataon’ ny Association des Bakongos (Abako) naorin’ i Joseph Kasavubu dimy taona tany aloha, sy ny Conscience africaine izay naorina tamin’ ny taona 1951, dia nivoy ny amin’ ny atao hoe “Fianakaviambe belgô-kôngôley” (Communauté belgo-congolaise) i Baudouin I. Nandroso paikady hanomanana olomanga kôngôley amin’ ny asan’ ny fanaovan-draharaham-panjakana ny governemanta belza.
Tsy fifanarahan' ny mpitaky fahaleovan-tenaModifier
Taorian’ ny fandrarana ny fivorian’ ny Association des Bakongos dia nisy fihetsiketsehana nipoaka tao Léopoldville tamin’ ny volana Janoary 1959, nanambara ny hanaovana fifidianana an-toerana ny governemanta belza. Nitombo ny tsy fitovian-kevitra teo amin’ ireo fikambanana ara-pôlitika, ka ny sasany, toa ny Mouvement national congolais (MNC) notarihin’ i Patrice Lumumba, dia nankasitraka ny hisian’ ny lalàm-panorenana mandala ny fanjakana federaly, ny hafa kosa, toa ny Association des Bakongos (Abako) izay notarihin’ i Joseph Kasavubu sy ny Confédération des associations katangaises (Conakat) dia nitaky ny hananganana fanjakana kônfederaly.
Nisy ny latabatra boribory tany Bruxelles nivorian’ ny mpitarika ny antoko pôlitika kôngôley sy ny olombe ara-drazana ary ny solontenan’ ny governemanta belza, tamin’ ny volana Janoary sy Febroary 1960. Tamin’izany no nandraiketana tamin’ ny 30 Janoary 1960 ny fahaleovan-tenan’ i Kôngô. Tsy nanapaka momba ny hisafidianana ny federalisma na tsia anefa ny Lalàna fototra nankatoavina taty aoriana.
Ny fitondran' i KasavubuModifier
I Kasavubu no filoham-pirenenaModifier
Tamin’ ny volana Mey 1960, ny fifidianana, izay nahazoan’ ny MNC tarihin’ i Patrice Lumumba fandresena, dia nanome ny toeran’ ny filoham-pirena an’ i Joseph Kasavubu, taorian’ ny fanambaràna ny fahaleovan-tena tao Léopoldville tamin’ ny 30 Jona 1960. Nihamaro ny herisetra, ary nikomy ny tafika kôngôley. Mba hamerenana ny filaminana sy hiarovana ireo Eorôpeana nitoetra tao Kôngô dia nanatevina ny tafika belza ny andian-tafika avy any Belzika. Neritreretin’ ny mponina ho fiverenan’ ny mpanjana-tany indray izany.
Ny fisaraham-bazan' i KatangaModifier
Nitombo ny korontana rehefa nanambara ny fahaleovan-tenan’ ny faritanin’ i Katanga i Moïse Tschombé izay notohanan’ ny Union minière ka nangataka ny fanampian’ ny miaramila belza, tamin’ ny 11 Jolay 1960. Namaly ny antson’ ny piraiminisitra Patrice Lumumba ny Filankevi-pilaminana (Conseil de sécurité) ao amin’ ny Firenena Mikambana ka nitaky ny hialan’ ny Belza sady nanapa-kevitra handefa ny Satro-manga (tafiky ny Firenena Mikambana) mba hamerina ny filaminana ao Kôngô. Nisolo miandalana ny tafika belza ny tafiky ny Firenena Mikambana nefa tsy niditra an-tsehatra mivantana. Noho izany dia nitodi-doha tany amin’ ny Firaisana Sôvietika i Patrice Lumumba.
Ny nahafatesan' i Patrice LumumbaModifier
Tamin’ ny 5 Septambra 1960 dia nanambara ny fanesorany an’ i Patrice Lumumba tsy ho piraiminisitra ny filoha Joseph Kasavubu. Tamin’ io fotoana io ihany koa no nanonganan’ i Patrice Lumumba an’ i Joseph Kasavubu. Ny tafika kôngôley notarihin’ i Mobutu Sese Seko, izay mpomba an’ i Joseph Kasavubu, no naka ny governemanta. Tamin’ ny 29 Septambra 1960 dia namindra ny fahefany tamin’ ny governemanta vonjimaika notarihin’ i Mobutu Sese Seko i Joseph Kasavubu. Nosamborina sy nogadraina i Patrice Lumumba, avy eo novonoina tamin’ ny 17 Janoary 1961, tany amin’ ny faritanin’ i Katanga.
Fitsaharan' ny fisaraham-bazan' i KatangaModifier
Tamin’ ny volana Janoary 1961 dia nanangana governemanta vonjimaika vaovao i Joseph Kasavubu, ka nisy mpikambana avy ao amin’ ny Antenimiera taloha izany (isan’ izay i Joseph Ileo izay notendrena ho piraiminisitra). Ireo mpomba an’ i Patrice Lumumba kosa dia nanao toraka izany tany Léopoldville (ka i Gisega no piraiminisitra). Tamin’ ny faran’ ny taona 1961 dia namely ny tafik’ i Tschombé ny tafiky ny Firenena Mikambana sy ny tafika kôngôley. Nanao fifampiraharahana hampitsaharana ny ady eo amin’ ny tafika misatro-manga sy ny tafika katangey i Dag Hammarskjöld sekretera jeneralin’ ny Firenena Mikambana. Tamin’ ny Desambra 1962 dia voafehin’ ny tafiky ny Firenena Mikambana i Elisabethville. Nandositra tany Kolwezi i Tchombé. Nitolo-batana izy tamin’ ny 15 Janoary 1963 ary nahazo famelan-keloka miaraka amin’ ireo namany.
Fitohizan' ny fiokoan' ireo mpomba an' i LumumbaModifier
Nitsahatra ny fisaraham-bazan’ i Katanga, nefa nitohy ihany ny fiokoan’ ireo mpomba an’ i Lumumba. Tamin’ ny volana Aogositra 1964 dia nitarika ny mpioko tao atsinanan’ i Kôngô amin’ ny fanoherana i Pierre Mulele sy i Gaston Soumaliot, ka azon’ izy ireo i Stanleyville (Kisangani ankehitriny). Nandefa haingana ny andian-tafiny, izay nampian’ ny mpikaraman’ ady eorôpeana sy afrikana tatsimo, ny fanjakana ka niezaka namerina indray io tanàna io. Nisy mpilatsaka amin’ ny elonaina belza, izay nentin’ ny fiaramanidina amerikana, nilatsaka tao Stanleyville, ka nahazo indray ity tanàna ity tamin’ ny 24 Novambra 1964. Hatramin’ izay ka hatramin’ ny taona 1968 dia niseho ny mpanao ady anaty akata niaraka tamin’ i Mulele, nefa nampiasa mpikaraman’ ady matetika ny tafika kôngôley mba hadresena azy ireo. Nisy anefa ireo fikambanana miafina mpanohitra izay tsy rava tao amin’ ny tangoron-tendrombohitra akaikin’ ny farihy Tangayika, ka isan’ izy ireo i Laurent-Désiré Kabila.
Ny fitondran' i Mobutu Sese SekoModifier
Fanonganana an' i Kasavubu sy fitondrana jadon' i MobutuModifier
Taorian’ ny tsy fahombiazan’ ny governementa iraisana dia nandray ny fitondrana i Mobutu Sese Seko tamin’ ny faran’ ny taona 1965, rehefa avy nanongana an’ i Kasavubu, ka nanambara ny tenany ho filohan’ ny Repoblika. Tamin’ ny taona 1966 dia nanangana governemanta jadona, izay ananan’ ny filoham-pirenena fahefana betsaka, izy sady antoko tokana no nekeny hisy, dia ny Mouvement populaire de la révolution (MPR). Izany fitondrana izany dia nohamafisiny tamin’ ny fampadaniana lalàm-panorenana vaovao tamin’ ny taona 1967.
Nanamafy ny maha filoha azy tamin' ny fifidianana i MobutuModifier
Tamin’ ny taona 1970 dia lany ho filohan’ ny Repoblika mandritra ny fito taona i Mobutu ka nanomboka namerina an’ i Kôngô ho "tena afrikana sy ho tena izy" amin’ izay. Niteraka ny tsy fifanarahany tamin’ ny Fiangonana katôlika izany satria nasainy nesorina ny anarana kristiana ka nosoloiny anarana maha Kôngôley.Tamin’ ny taona 1971 dia nanova ny anaran’ i Kôngô ho Zaira (Zaïre) i Mobutu, ny renirano Congo koa dia novany ho Zaïre, ny anaran’ ny tanàna maro sy ny anaran’ ny farihy Albert dia nantsoina hoe farihy Mobutu. Ny ampahan’ io farihy io ao Oganda anefa tsy niova anarana.
Fitontogan' ny toekarena sy pôlitikan’ ny fitsitsianaModifier
Nihena ny fidiram-bolan’ i Zaira, izay niakina indrindra amin’ ny fitrandrahana varahina, nanomboka tamin’ ny taona 1974. Tamin’ ny taona 1976 dia voatery niantso ireo orinasa vahiny hiverina any Kôngô i Mobutu. Na dia nisafidy ny fitondrana jadona aza i Mobutu dia nifandray tamin’ i Belzika sy i Frantsa izay nisakana ny fiverenan’ ny fisaraham-bazan’ ireo mpioko tao Katanga tamin’ ny taona 1977 sy 1978. Nanampy azy koa tamin’ izany i Marôka fa i Angôla no nanampy ny mpioko. Tamin’ ny taona 1986, rehefa tsy nanaraka intsony ny pôlitikan’ ny fitsitsiana i Zaira dia latsaka tanatin’ ny fahasahiranana ara-toekarena lalina.
Fihozongozonan' ny fitondran' i MobutuModifier
Tamin’ ny taona 1990 dia niseho matetika ny fitokonana sy ny fihetsiketsehana nanoherana ny kolikoly nanjaka teo amin’ ny fitondrana, nanoherana koa ny fandrobana ny harem-pirenena nataon’ ny filohan’ ny Repoblika, nanoherana ny fanitsakitsahana ny zon’ olombelona mbamin’ ny demôkrasia. Rehefa noteren’ ny firenena tandrefana hampanjaka ny demôkrasia i Mobutu dia nanaiky hampanao fihaonambem-pirenena. Tsy nanaiky ny hanovana ny lalàm-panorenana vaovao anefa i Mobutu. Hatramin’ izay ka hatramin’ ny taona 1994 dia nipoaka ny savorovoro sy ny fihetsiketseham-panoherana izay nofaizin' i Mobutu mafy. Nanomboka tamin’ ny taona 1994 dia nihatsara ny toe-draharaha, vokatry ny fifanarahana ny amin’ ny hitsinjarana ny toerana eo amin’ ny filoham-panjakana sy ny Filankevitra Ambonin’ ny Repoblika (Haut conseil de la République), izay nisahana vonjimaika ny asan’ ny Antenimiera.
Ny olana nateraky ny adin’ ny Hoto sy ny TotsyModifier
Ny firohotry ny Hoto mpitsoa-ponenana miisa manodidina ny 1 500 000 avy any Roanda, nanomboka tamin’ ny fiafaran’ ny taona 1994 teo amin’ ny sisin-tany ao atsinanan’ i Zaira, dia nanampy ny fikorontanana anatiny ao Zaira. Nandositra ny fitondrana totsy any Kigali ao Roanda mantsy ireo Hoto ireo. Niharatsy ny toe-draharaha nandritra ny fahavaratry ny taona 1996 rehefa niray hina hiady amin’ ny Totsy baniamolenge (Banyamulenge) ny tafika zairoà sy ny milisy hoto. Ireto Totsy mpiompy sady mpiady ireto dia nanampy ny FPR tamin’ ny ady tao Roanda. Niainga avy ao Roanda miaraka amin’ ny tafika roandey izy ireo ka nahazo fandresena miezinezina manoloana ny tafik’ i Zaira.
Ny mpitari-tafika roandey, indrindra ny jenaraly Paul Kagame, dia nanao izay hampilamina ny raharaha ao amin’ ny tobin’ ny mpitsoa-ponenana nofehezin’ ny tompon’ andraikitra tamin’ ny fandripahana ny Totsy tao Roanda. Tamin’ ny tenantenan’ ny volana Oktobra 1996 dia niharan’ ny fanafihan’ ny Totsy zairoà mpioko, izay notarihin’ ireo mpiady taloha niaraka tamin’ i Mulele, ireo tobin’ ny mpitsoa-ponenana tao amin’ ny faritra manakaiky an’ i Bukavu. Nandritra ny fararanon’ ny taona 1996 dia nirohotra nankany Roanda ny mpitsoa-ponenana hoto.
Fidarabohan’ ny fitondrana tao KisanganiModifier
Niainga avy ao amin’ ny sisin-tany atsinanana ny mpioko zairoà izay nahazo fitaovana tamin’ i Roanda sy tamin’ i Oganda ary tamin’ i Angôla. Nandroso nankany andrefana ka naka ny faritr’ i Goma, ny an’ i Bukavu ary ny an’ i Kisangani, sy nianatsimo koa izy ireo nankany amin’ ny faritra misy fitrandrahana harena an-kibon’ ny tany any Katanga sy any Kasaï. Nikisaka haingana ny fikambanana izay nirafitra manodidina an’ i Kabila sy ny Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL), ka nifehy ireo faritra navelan’ ny tafi-panjakana. Tsy nandray karama nandritra ny volana maromaro ny miaramila zairoà ka niala tao amin’ ireo faritra ireo sady nandroba ny tanàna maro nandalovany. Tsy afaka nanohitra i Mobutu rehefa tsy voafehiny intsony ireo faritra manana ny maha izy azy ireo.
Rehefa resy ny fitondrana tao Kisangani sady naongana i Kengo Wa Dongo, dia nanambara ny fananganana komity misahana ny fifampiraharahana i Mobutu Sese Seko. Manoloana ity tsy fifanarahana ity dia nisy firenena fito ambin’ ny folo ao amin’ ny Firaisambe Afrikana (OUA), izay nisahana ny fandaminana ny tsy fifanarahana, nanao fihaonana tampony tao Lome tamin’ ny volana Marsa 1997. Ny tafiky ny AFDL kosa nanohy ny fandrosoany mankany Kinshasa. Nitombo ny fanerena avy amin’ ny fianakaviambe iraisam-pirenena dia nanao izay hampihaonana an’ i Mobutu sy i Kabila ny mpanelanelana avy amin’ ny Firenena Mikambana sy i Etazonia ary i Afrika Atsimo. Tanteraka izany tamin’ ny 4 Mey 1997 teo ambonin’ ny sambo afrikana tatsimo iray, nefa samy niziriziry amin’ ny heviny ny mpifanandrina.
Ny fitondran’ i Laurent-Désiré KabilaModifier
Fanonganam-panjakana sy ampihi-mambaModifier
Tamin’ ny volana Mey 1997 dia niditra ao Kinshasa ny andian-tafiky ny AFDL ka nanambara ny tenany ho filoha ho an’ ny Repoblika vaovao i Laurent-Désiré Kabila. Izany repoblika izany dia nantsoiny hoe Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô (Republique Démocratique du Congo). Nandao an’ i Kôngô i Mobutu ka nitsoaka nankany Marôka. Nataon’ i Laurent-Désiré Kabila ampihi-mamba ny fahefana rehetra ka niteraka fanoherana avy amin’ ireo mpanohitra an’ i Mobutu taloha. Nisy koa mpomba an’ i Mobutu taloha izay nitsangana ka nanohitra azy.
Tompon’ antoka tamin’ ny fandripahana ny HotoModifier
Nanda ny hanaovan’ ny Firenena Mikambana fanadihadiana momba ny fanjavonan’ ny Hoto miisa 200 000 tao amin’ ireo ala atsinanana i Laurent-Désiré Kabila. Ny tatitry ny Firenena Mikambana, izay nivoaka tamin’ ny taona 1998, dia niampanga ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô sy i Roanda ho nahavanona heloka bevava amin’ ny maha olona. Niteraka fankahalana ny Totsy ao Kôngô ny fanjakazakan’ ireo Roandey nanampy an’ i Kabila. Noho izany, tamin’ ny volana Jolay 1998 dia nanaisotra minisitra maro i Kabila sy niangavy ny andian-tafika ogandey sy roandey mba handao an’ i Kôngô.
Fikomian’ ny Totsy baniamolengeModifier
Fotona kely taty aoriana dia nikomy ireo Totsy baniamolenge izay nanampy an’ i Kabila tamin’ ny fakana ny fitondrana, ka nandrahona ny haka ny renivohitra sy ny seranan-tsambon’ i Matadi. Tamin’ izany fotoana izany dia nanenjika ny andian-tafi-panjakana ao Kivu ny mpitari-tafika roandey James Kabare sady nanohy ny fampijaliany ny mpitsoa-ponenana hoto. Nangataka fanampiana tamin’ i Zimbaboe, tamin’ i Tsady, tamin’ i Namibia, tamin’ i Sodàna ary indrindra tamin’ i Angôla i Kabila. Nitsimbadika ka namely ny mpioko manohitra azy (ny Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA) tamin’ ny fotoana nanavotany an’ i Kinshasa i Angôla.
Na dia teo aza ny ezaka fampihavanana nataon’ i Zimbaboe dia tsy nisy niova hevitra ny mpifanandrina. I Arthur Z’Ahidi Ngoma, izay mpandrindra ny fiokoana hatramin’ ny taona 1998, avy eo i Ernest Wamba dia Wamba, izay samy Kôngôley lohandohany ao amin’ ny Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD) dia niala an-daharana, ary nanambara i Oganda fa hampody ny andian-tafiny. Tamin’ ny vaolana Jolay 1999 dia nifanaraka tao Lusaka any Zambia ny firenena enina (i Angôla, i Namibia, i Zimbaboe, ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô, i Roanda ary i Oganda), izay nandray anjara tamin’ ny ady, fa hampitsahatra an’ izany ady izany.
Fanirahana ny MONUC hiantoka ny fampitsaharana ny adyModifier
Nifanarahana tamin’ izany ny handefasana ny Mission des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC), izay nahitana miaramila misatro-manga miisa 5 500, niandraikitra ny fanamarinana ny fiatoan’ ny ady.
Satria ny antony lehibe nahatonga ny ady dia ny fifehezan’ ny fikambanana mpioko ny akora fanodina (indrindra ny diamondra), dia samy niziriziry amin’ ny heviny ny mpifanandrina. Na dia ireo firenena mpinampana aza dia nisy fotoana nifamelezana koa (ohatra ny ady matetika tao Kisangani nifamelezan’ i Oganda sy i Roanda).
Ny fitondran’ i Joseph KabilaModifier
Fiakaran’ i Joseph Kabila teo amin’ ny fitondranaModifier
Tamin’ ny volana Janoary 2001 dia nisy namono tao Kinshasa tamin’ ny fomba sy antony tsy tena mazava i Laurent-Désiré Kabila. Ny ampitson’ ny fandevenana azy dia ny zanany lahy Joseph Kabila no notendren’ ny Antenimiera vonjimaika ho filohan’ ny Repoblika hisolo azy. Tany Tanzania sy tany Oganda no nahalehibe azy alohan’ ny hiverenany tao an-tanindrazany tamin’ ny taona 1996. Nanaraka fiofanana miaramila tany Sina izy. Nanao fitsidihana ara-diplômasia tany amin’ ny firenena valo ambin’ ny folo i Joseph Kabila.
Nanangana governemanta vaovao tamin’ ny volana Avrily 2001 i Joseph Kabila ary tsy nampidiriny amin’ izany ireo olona akaiky ny rainy. Nanambara ny fankasitrahany ny hisian’ ny fifidianana amin’ ny fotoana tsy ela araka izay azo atao izy. Nitohy ny fifampiresahana teo amin’ ny samy Kôngôley taorian’ ny tsy fahombiazan’ ireo fihaonana tany Addis-Abeba tamin’ ny volana Oktobra 2001.
Fifanarahana hitondrana ny firenenaModifier
Taorian’ ny fialan’ ny tafika rehetra avy any ivelany (Roanda, Oganda, Angôla, Namibia ary Zimbaboe) tamin’ ny taona 2002 dia nandroso tokoa ny fizorana mankany amin’ ny fandriam-pahalemana sy ny fampihavanam-pirenena tamin’ ny volana Desambra 2002, taorian’ ny fifanarahana nosoniavina tany Pretoria momba ny fitondrana tetezamita ao amin’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô. Novitaina tamin’ ny volana Avrily 2003 ny fifanarahana, izay namporisihin’ ny filoham-pirenena Thabo Mbeki. Taorian’ ny famoahana ny lalàm-panorenana vaovao dia natsangan’ i Joseph Kabila ny governemanta tetezamita tamin’ ny volana Jolay 2003, izay nahitana solontena avy amin’ ny Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD) notarihin’ i Azarias Ruberwa, avy amin’ ny Mouvement de libération du Congo (MLC) notarihin’ i Jean-Pierre Mbemba, avy amin’ ny mpanohitra tsy mitam-piadiana ary avy amin’ ny fiarahamonim-pirenena.
Fitohizan’ ny ady an-trano tany amin’ ny faritra atsinananaModifier
Nitohy ny fifanandrenana tao amin’ ny faritra atsinanana vokatry ny disadisa ara-poko teo amin’ ireo andian’ olona mitam-piadiana. Rehefa nody ny tafika ogandey dia nisy ny fifandriganam-poko vokatry ny fifanandrinan’ ny milisy Hema sy Lendu manodidina ny tanànan’ i Bunia ao Ituri. Nitombo ny herisetra ka tonga ny tafika iraisam-pirenena notarihin’ i Frantsa sy nomen’ ny Firenena Mikambana alalana mba hiaro ny mponina. Nosoloana miaramila avy ao amin’ ny Satro-manga ity tafika iraisam-pirenena ity taty aoriana. Izany tafiky ny Firenena Mikambana izany dia nomena ny anarana hoe Mission des Nations Unis au Congo (MONUC), izay nahitana miaramila miisa 17 000.
Fahalanian’ i Joseph Kabila voalohanyModifier
Nifarana tamin’ ny volana Jolay 2006 izany fanamafisana ny demôkrasia izany tamin’ ny fanaovana fifidianana isan-karazany. Izany no fifidianana ara-demôkrasia voalohany hatramin’ ny nahazoan’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô ny fahaleovan-tenany. Nandray anjara tamin’ ireo fifidianana ireo ny Kôngôley miisa manodidina ny 25 000 000. Nandresy tamin’ ny fifidianana filoham-pirenena i Joseph Kabila tamin’ ny nahazoany 58,05 % tamin’ ny fihodinana faharoa. I Jean-Pierre Bemba no mpifanandrina farany taminy. Nisy ny fanoherana izany voka-pifidianana izany.
Fahalanian’ i Joseph Kabila fanindroanyModifier
Nandray ny toerana maha filohan’ny Repoblika azy i Joseph Kabila tamin’ ny 6 Desambra 2006. Nitohy ihany anefa ny ady, indrindra tao amin’ ny faritr’ i Kivu. Ny Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) dia nanohy nandrahona ny sisintany roandey sy ny Baniaroanda. Nanohana ny mpiokon’ ny Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD-Goma) izay nanohitra ny fitondrana tao Kinshasa.
Tao amin’ ny tapany avaratr’ i Katanga dia tsy voafehin’ ny fitondrana ny milisin’ i Laurent-Désiré Kabila izay nampiadin’ ity filoham-pirenena ity tamin’ ny milisy roandey, nefa tsy nampandraisina anjara tamin’ ilay fifanarahana tao Lusaka tamin’ ny taona 1999. Hatramin’ ny volana Novambra 2010 dia nohatanjahina ka lasa Mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo MONUSCO ny MONUC.
Tamin’ io volana io ihany dia voatosiky ny tafika kôngôley avy ao amin’ ny tendrombohitra ao Nord-Kivu ny mpioko M23 izay tsy niady intsony sady nandrava ny fikambanany tamin’ ny 3 Desambra 2013 tamin’ ny alalan’ ny fifanarahana nosoniavina tao Nairobi. Tamin’ ny taona 2016 dia nisy ny diasadisa tamin’ ny hirosoana amin’ ny fifidianana amin’ ny taona 2016 noho ny mety hanampian’ i Joseph Kabila 16 volana ny fotoam-pitondrany. Nisy ny fihetsiketseham-pikomiana tamin’ ny faritany maro.
Ny fitondran’ i Félix TshisekediModifier
Niaraka tamin’ ny antokon’ i Joseph Kabila, izay lasa loholona mandra-pahafatiny, i Félix Tshisekedi tamin’ ny fanaovana fampielezan-kevitra. I Martin Fayulu, mpifanohitra aminy matanjaka indrindra, izay nitarika vonjimaika tamin’ ny fifidianana filoham-pirenena, dia nanaiky ny voka-pifidianana. Tsy nandray ny fitoriana nataony ny Fitsarana momba ny Lalàm-panorenana (Cour constitutionnelle). Vokatr’ izany fiarahan’i Félix Tshisekedi amin’ ny antokon’ ny Joseph Kabila izany dia marin-toerana ny fitondrany, noho ny nahazoan’ io antoko io toeran’ ny solombavam-bahoaka miisa 337 amin’ ny 500.
Ireto ireo firenana mpifanolo-bodirindrina amin’ io firenena io: ao andrefana ny Repoblikan’ i Kôngô, ao avaratra ny Repoblikan’ i Afrika Afovoany sy i Sodàna, ao atsinanana i Oganda sy i Roanda ary i Borondy ary i Tanzania, ao atsimo i Zambia sy i Angôla.
Ny tany sy ny zavaboary ao aminyModifier
Ny vohon’ny tany sy ny ranoModifier
Ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô dia manana velaran-tany mirefy 2 344 885 km². Ao anaty lempona midadasika no misy azy dia ny lemaky ny ony Congo nahazoany io anaray io. Ny rano indray dia harena voa-janahary lehibe ho an’ ny Repoblika Demôkratikan’i Kôngô, izay manana otri-kerin’ aratra avy amin’ny rano lehibe indrindra maneran-tany.
Ity ony ity no mampiray an’ io firenena io noho ny fananany lemaka midadasika mirefy 3 820 000 km². Marin-toerana ny hadirin-drano entiny noho ny fitsimbadihan’ ny fotoan’ny orana ao amin’ ireo faritra avaratra sy atsimon’ ny fehiben-tany. I Oubangui, izay sampan-drano mamatsy azy, dia mipoitra avy ao amin’ ny faritra avaratra, fa izy tenany sy ireo sampan-drano hafa mamatsy azy dia mipoitra avy ao amin’ ny faritra be hivoka ao atsimo. Ao amin’ ny faritra atsimo-atsinanana dia mamakivaky lembalemba avo mikintoana maro i Congo alohan’ ny hanamoronany ny lembalemba Bateke. Ny sisin’ ny lempona avaratra dia misolampy mianambony ka mamorona ny lembalemban’ i Shaba (na lembalemban’ i Katanga) any amin’ ny 1 220 m ambonin’ ny ranomasina, izay mitohy amin’ ny tangoron-tendrombohitr’ i Mitumba sy ny an’ i Kundelungun.
Ao atsinanana no mipoitra ireo kitoantoana foronin’ny afotroa (volokano) vokatry ny fahavakisan’ny Rift Valley, ao amin’ny faritry ny Farihy Lehibe. Ao no ahitana ireo tendrombohitra avo indrindra ao Kôngô, dia i Karisimbi (4 507 m), i Mikeno (4 437 m), i Nyaragongo (3 470 m), ao amin’ny tangorom-bohitry ny afotroa Virunga, i Ruwenzori, ny “tendrombohitry ny Volana”, izay mahatratra 5 119 m ao amin’ ny tendro Marguerite.
Manerinerina ao avaratry ny farihy Albert, izay ao amin’ny rafi-dranon’i Nily, i Ruwenzori, fa ny farihy Tanganyika kosa izay ao amin’ny rafi-dranon’ny ony Congo dia mivelatra manaraka ireo tendrombohitra Mitumba sady manefitra an’i Kôngô amin’i Tanzania. Kely ny morontsirak’ i Kôngô, izay mirefy 40 km fotsiny ao amin’ny Ranomasimbe Atlantika, izay manamorona ny fivarinan’ ny onin’ i Congo ao amin’ ny ilany ankavanana sady manasaraka an’ io firenena io amin’ i Angôla.
Ny Repoblika Demôkrartikan’i Kôngô dia vakivakin’ny fehiben-tany ka noho izany dia ny toetanim-pehibe izay sady mafana no mando manadavan-taona no manjaka ao, nefa misy fahasamihafana kely izany arakaraka ny fehin-tany sy ny haambo (haavo miohatra amin’ny ranomasina). Ny faritra afovoany dia be orana mandavan-taona, manodidina ny 26 °C ny maripana. Ao avaratra sy ao atsimo dia ifandimbiasan’ny fizaran-taonan’ny orana (maharitra valo volana eo ho eo) sy ny fizaran-taona maina (maharitra efa-bolana eo ho eo). Ao amin’ny tangoron-tendrombohitr’ i Ruwenzori ary indraindray ao amin’ ireo afotroa Virunga dia betsaka ny orampanala milatsaka satria mivoatra manaraka ny haambo ny zavamaniry sy ny toetany.
Ireo havoanan’i Kivu ao atsinanana, izay tany misolampy tohin’ny tangoron-tendrombohitra an-dranomasin’i Congo-Nil, dia matetika rakotra ahi-maitso ary ny nofon-taniny avy amin’ny afotroa dia lonaka ka mety amin’ny fambolena. Any ambanimbay any dia hitana alam-pehibe midadasika sy mikitroka izay mandrakotra ireo faritra atsinanana sy avaratra atsinanana. Ny ala midadasik’i Ituri dia mivelatra avy any amin’ ny fihaonan’ i Congo sy i Aruwimi ao amin’ ny farihy Albert sady mandrakotra veleran-tany manakaiky ny 65 000 km². Izany ala izany no faritra farany onenan’ ireo Pigmea. Maro ireo karazan-kazo ahazoana fingotra sy ireo palmie fanamboara-menaka izay volen’ny mponina ao amin’ io faritra io, hita ao koa ny kafe sy ny hasy (na landihazo), ny akondro ary ny voanio. Rakotry ny fatraa ireo faritra avo indrindra manamorona ny lemak' i Congo.
Biby sy voronaModifier
Betsaka ny karazam-biby sy vorona. Ao ireo karazam-biby atahorana ho lany tamingana toy ny gorilin-tendrombohitra ao amin’ireo Virunga, ny elefanta, ary koa ireo biby mampinono lehibe toy ny liona, ny leôparda, ny jirafa, ny lalomena, ny ôkapy, ny zebra ary ny bofalô. Ny biby mandady sy mikisaka koa dia hita ao koa, isan’izany ny bibilava pitôna, ny voay. Hita ao koa ny vorona samihafa toy ny boloky, ny sama, ny karazan-takatra. Ny toetany mando dia mampitombo isa ny bibikely, ka anisan’ izany ny moka anôfela izay mitondra ny kantsentsitry ny tazomoka, ny lalitra tsetse miaina eny amin’ ny tany lemaka izay mamindra ny aretin’ ny torimaso.
Ny mponina sy ny fiarahamoninaModifier
Ny vondrom-poko sy fokoModifier
Ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô dia ahitana vondrom-poko fito sy zana-poko mihoatra ny telonjato. Ny vondrona lehibe indrindra dia vondrona banto: ny Kôngô (Kongo), ny Bateke (Bateke), ny Loba (Luba), ny Londa (Lunda) ary ny Koba (Kuba). Ao avaratra no ahitana ny Nilôtika sy ny Pigmea (izay monina any amin’ ny faritra be ala).
Ny mponina ao amin’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô dia nahatratra any amin’ ny 68 008 922 tamin’ ny taona 2008, izay manana salan-kakitroka 30 mp/km². Izany isa izany dia manakaiky ny 86 000 000 ankehitriny. Ny toerana tena be mponina dia ao amin’ ny faritra fitrandrahana harena an-kibon’ ny tany ao Shaba sy ao amin’ny Bas-Congo. Latsaky ny ampahatelon’ ny mponina no monina an-tanàn-dehibe. Tamin’ ny taona 2008 dia 42,50 ‰ ny taham-pahaterahana, ary ny taham-pahafatesan’ ny zaza dia 64 ‰ ary ny salam-pahela velona dia 57,6 taona.
Tsy ampy ny fandaminana momba ny fitsaboana. Nihanaka izaitsizy ny ny sida. Tamin’ ny volana Avrily 1995 dia nisy valan’ aretin-tazo mahavery ra vokatry ny virosy Ebola (avy amin’ ny anaran’ ny renirao Ebola; izay akainkin’ ny tanàna nahitana voalohany ilay aretina tamin’ ny taona 1976) izay namono olona mihoatra ny 160 tao amin’ ny faritr’ i Kikwit ao atsinanan’ i Kinshasa.
Na dia manana harena an-kibon’ ny tany be dia be aza ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô izay firenena lehibe indrindra ao Afrika Afovoany, ny PIB dia 10 000 tapitrisa dolara tamin’ ny taona 1991 ary nidina 5 700 tapitrisa dolara tamin’ ny taona 2003. Taorian’ ny 25 taona nisian’ ny ady an-trano sy ny ampolo taonany maro nisian’ ny kolikoly dia nihatafarina ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô. Ny 10 %n’ ny fahafahan’ny toerana misy harena an-kibon’ ny tany lehibe ihany mantsy no voatrandraka tamin’ ny taona 2003. Ny trosa ivelany dia tafakatra 11 600 tapitrisa dolara tamin’ ny taona 2004 ary ny 75 %n’ ny mponina no miaina amin’ ny vola latsaky ny iray eorô isan’ andro. Ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô dia afaka niditra ao amin’ ny programa Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) ka afaka niakatra hatrany ny toekareny tamin’ ny taona 2002.
Ny loharanon-karena voa-janaharyModifier
Ahitana harena an-kibon’ ny tany be dia be ny ao Maniema sy ao Kivu ary ao Katanga, indrindra ny varahina, ny oranioma, ny volamena ary ny diamondra.
Ny tobim-pamokarana herin’aratra amin’ ny rano izay notokanana tamin’ ny taona 1972 ao Inga, ao an’iràn’i Kinshasa ao amin’ ny ony Congo no lehibe indrindra maneran-tany, nefa ny ampahany be amin’ ny tanjaky ny tohadranon’ i Inga dia tsy ampiasaina.
Ny hazo sarobidy sy ny hazo fanaovam-panaka sy fanorenana (teka, ebena, sederan’ i Afrika, ny akazo, sns) dia misy betsaka. Ny alam-pehitany dia mandralotra ny 6 %n’ ny velaran-tany misy ala maneran-tany sy saika ny antsasaky ny velaran-tany misy ala aty Afrika, nefa izay ala izany dia athorana ho ripaky ny tavy. Tamin’ ny taona 2006 dia any amin’ ny 75 800 000 m³ ny famokarana hazo, indrindra ny hazo fandrahoana satria sarotra dia sarotra ny fitaterana ny hazo any amin’ ny morontsiraka.
Ny fambolena dia sahanin’ ny ankamaroan’ ny mponina afaka miasa sady miantoka ny 45,7n’ ny PIB tamin’ ny taona 2006. Na dia lonaka aza ny lemak’ i Congo dia ny 3 %n’ ny velaran-tany ihany no voavoly. Ny vokatra isan-taona dia ny mangahazo (voly fihinana lehibe indrindra) sy ny katsaka ary ny voanjo. Ny kafe no voly fanondrana lehibe indrindra, manaraka ny landihazo (hasy) sy ny kakaô ary ny dite. Ny voly fanondrana dia nihena raha mitaha amin’ny voly fihinana taorian’ ny namadihana ho orinasam-pirenena ny orinasa vahiny misahana izany tamin’ ireo taona 1970.
Ny fiompiana sy ny jonoModifier
Tamin’ ny taona 2006 dia miisa 20 000 000 ny akoho amam-borona, 4 020 000 ny osy, 900 000 ny ondry, 757 000 ny omby, ary 960 000 ny kisoa. Ny fiompiana omby dia hita indrindra ao amin’ ireo tany avo vokatry ny fahamaron’ ny lalitra tsetse eny amin’ ny tany lemaka. Ny jono, izay atao an-dranomamy, dia miantoka ny ampahany betsaka amin’ ny sakafo.
Harena an-kibon’ny tany sy taozava-baventyModifier
Ny 15 %n’ ny mponina afaka miasa dia miasa amin’ ny sehatry ny harena an-kibon’ ny tany sy ny taozava-baventy, izay miantoka ny 27,7 %n’ ny PIB tamin’ ny taona 2006. Ny harena an-kibon’ ny tany indrindra no herena lehibe ao amin’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô, izay mihazona ny antsasaky ny tahirin-kôbalta maneran-tany sady isan’ ireo manana tahirim-barahina lehibe indrindra maneran-tany. Ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô koa taloha no firenena laharana voalohany amin’ ny fanondranana kôbalta maneran-tany (6 100 tônina tamin’ ny taona 1996), izy koa taloha no laharana faharoa amin’ ny famokarana diamondra (20 000 000 karà tamin’ ny taona 1991). Ny varahina no vokatra mampidi-bola be indrindra isan’ olona amin’ izy ireo. Mitrandraka firapotsy volamena, volafotsy, fanitso, manganezy, tongstena ary kadmioma koa ny Repoblika Demôkratikan’i Kôngô. Ny otri-tsolitany an-dranomasina dia trandrahina nanomboka tamin’ny taona 1975. Ny tohodranon’ i Inga eo amin’ ny onin’ i Congo no lehibe indrindra aty Afrika.
Ny taozava-baventy, izay nandroso manodidina ny fitrandrahana akora, indrindra ny varahina, dia tra-pahasahiranana noho ny fitontoganan’ ny toekarena sy noho ny fahasimban’ ny fotodrafitrasa vokatry ny ady (lalana, seranan-tsambo, sns).
Ny fifanakalozana anatinyModifier
Ny vola Zaira vaovao (nouveu zaïre) no vola ampiasaina ao amin’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô nanomboka tamin’ ny taona 1993. Mitentina 3 000 000 Zaira taloha (anciens zaïres) ny iray Zaira vaovao. Taorian’ ny nahatingavan’ i Laurent-Désiré Kabila teo amin’ ny fitondrana dia naverina ho farantsa kôngôley (franc congolais) izany vola izany. Izany fanoloana izany dia natao mba hisakanana ny fiakaran’ ny vidim-piainana izay nihoa-pampana loatra nefa tsy tratra izany tanjona izany. Hatramin’ ny taona 1995 dia nijanona tsy nihodina intsony ny rafi-pitehirizam-bola, satria ny noraiketin’ ny varo-maizina ny sandan’ ny vola.
Ny fahasahiranana nahazo ny raharaham-barotra tao Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô dia nohamafisin’ ny fahasimban’ ny lalana. Ny lalam-by izay mitotaly 3 641 km no fitaovam-pitaterana lehibe indrindra anatin’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô, izay mampifandray amin’ ireo seranan-tsambon’ i Angôla ao Benguela, sy amin’ ny faritra atsinanana sy atsimon’ i Afrika. Ny fahasimban’ ny arabe (153 497 km) hatramin’ ny taona 1990 dia manelingelina ny famatsiana ny tsena maro ny fitaterana ny harena voa-janahary. Ny renirano sy ny ony azo ifamoivoizana amin’ ny sambo, izay mirefy 17 285 km, no tena ampisaina, ka ny ony Congo dia azo ifamoivoizana amin’ ny ampahany avy any amin’ ny vinany fivarinany any an-dranomasina ka hatrany amin’ ny tanànan’ i Matadi ary any an’avàn’ ny tanànan’ i Kinshasa. Misy seranam-piaramanidina iraisam-pirenena dimy ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô.
Ny varotra ivelany tao Zaira taloha dia tsy mifandanja satria ny fanafarana entana no be. Nifamadika izany tamin’ ny taona 1991. Ny varahina dia misahana ny antsasaky ny vola miditra amin’ ny fanondranana entana. I Belzika, i Etazonia, i Alemaina ary i Frantsa no mpiara-miombona antoka momba ny varotra ivelany amin’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô.
Ny ankamaroan’ ny mponina ao amin’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô dia Kristiana ka ny 47 % dia Katôlika ary ny 28 % Prôtestanta. Vitsy an’ isa ny Miozolmàna. Ny fivavahana mifangarohanro (toy ny kimbangisma izay arahin’ ny 3 %n’ ny mponina) dia manafangaro singa avy amin’ ny kristianisma sy ny fivavahan-drazana afrikana.
Ny teny frantsay no teny ôfisialin’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô. Misy fiteny tompon-tany miisa 220 ny ao amin’ io firenena ka ny ankamaroan’ ireo dia fiteny banto, nefa ny efatra no natao fitenim-pirenena ifaneraseran’ ny mponina, dia ny fiteny soahily, ny fiteny lingala, ny fiteny kikôngô ary ny fiteny tsiloba.
Ny fiteny soahily dia tenenin’ny 35 %n’ ny mponina ao amin’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô ao ao amin’ ireo ivontoerana lehibe sy ao amin’ ny faritra atsinanana (Katanga, Nord-Kivu, Sud-Kivu, ary ny faritra atsimo atsianan’ ny faritany Orientale). Ny fiteny lingala dia tenenin’ ny 30 %n’ ny mponina, ao Kinshasa sy ao amin’ ny faritanin’ i Bandundu, ao amin’ ny faritanin’ i Équateur ary ao amin’ ny faritany Orientale. Ny fiteny kikôngô izay tenenin’ny 15 %n’ ny mponina, ao Bas-Congo. Ny fiteny tsiloba izay ampiasain’ ny 15 %n’ ny mponina, ao amin’ ny faritany roa ao Kasaï.
Tamin’ ny taona 2005 dia nahatratra 89,8 %n’ ny mponina no mahay mamaky teny sy manoratra. Zaza telo amin’ ny efatra (75 %) no tafiditra an-tsekoly tamin’ ny taona 1980. Na dia izany aza, ny fifanolanana ara-pôlitika tamin’ ny taona 1990 dia niteraka fihenanan’ ny fankanesan’ ny zaza ny an-tsekoly tamin’ ny faritra maro, noho izany dia nidina ambanin’ ny 40 % isan’ ny zaza 12 hatramin’ ny 17 taona mianatra. Na dia ambany dia ambany aza ny tahan' ny fidirana an-tsekoly any amin’ ny ambaratonga fahatelo dia ahitana oniversite telo ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô izay miorina ao Kinshasa sy Lubumbashi ary Kisangani.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Repoblika_Demôkratikan%27_i_Kôngô&oldid=1037927"
Dernière modification le 16 Septambra 2021, à 09:49
Voaova farany tamin'ny 16 Septambra 2021 amin'ny 09:49 ity pejy ity.